म संगै जापन जाने केटा छ भने मेरो बारेमा अपडेट हेर्नू होला। « हाम्रो ईकोनोमी
म काठमान्डाैमा पढदैछु बेचलर रनिङमा छु । मेराे पढाइकाे विषय मेनेजमन्ट विषायमा पढछु त्यसकारणा जापनजानकाे लागी मैले लगभग सम्पुर्ण तयारी गरी सके त्यस कारण मैले याे साेचेकी म त पढन जाने हाे ।
मेराे लगभग उमेर पनि पुगी सकेकाे छ । साथमा मैले विवाह गरेर एउटा इमान्दार केटालाई लान सके भने उसले नि पैसा कमाउन सक्छ ।
अनि मलाई पनि साहारा हुनछ । भन्ने मेराे मनमा एउटा विचार अायाे ।
उत विचार मैले मेराे घरमा बा अामालाइ पनि भने, र बा अामाबाट पनि त्याे कुरा लाई स्विकार गर्नुभयाे ।
मैले लगभग २, ३ महिना सम्म इमानदार मेहेनति सहनसिल भएकाे २२ बर्ष नाघेकाे केटा पनि खाेजे तर भने जस्ताे पाउन सकिन र म पूर्व घरबाट फर्केर अाए ।
र हाल म अहिले पनिकाठमाणडाैकाे बसुन्धारामा नहि बसि रहेकाे छु । त्यस कारणा मलाइ छिटाे भन्दा छिटाे वाहिर जानु परने भएकाे हुदा साेहिवमाेजिमकाे मेहेनति इमानदार केटा पाएमा विवाह गरिहाल्ने छु ।
त्यस कारणा अाज मैले राम्राेअसल केटाकाे खाेजिले गर्दा याे फेसबुक मार्फत सबैले जानकारी गराएकाे छु पक्कै पनि तपाइ सबैले पढेर मलाइ उतर दिनु हुन्छ ।
भन्ने विश्वासलागेकाे छ । यदि तपाइमा मैले भने जस्ताे गुणाहरू छ भने मात्र मलाइ मेजेस गर्नुहाेला नत्र पिलिज तपाइहरूले दुख नगरीदुनु हुन अनुराेध सबैमा गर्दछु । मैले अाज सम्म अाइपुग्दा धेरै दुखहरू भाेगेकाे हुदा खेरी उत दुखलाइ बुझनेखालकाे केटा चाहिएकाे हाे ।
मेराे हरेक पाइा पाइलामा साथ दिने म संगे सधे वस्ने, म संगै रमाउने मेहेनति लपनझपन नभएकाे हुनु पर्नेछ । यसकारणा पनि मैले त्यस्सताे खालकाे केटा खाेजेकाे हाे/ कृपयाआफ्नो नम्बर वा इमेल आइडि तल कमेन्ट गर्नुहोला।
म संगै जापान जाने संगै बस्ने जिवन साथी चाहियो मेरो पुरा विवरण हेरी सम्पर्क गर्नुहोस् !म साधारणा लेखपढ भएकाे एउटा गाउकाे केटी हु ।
मेराे घर पूर्वकाे दमकमा पर्दछ ।हाल म काठमाणडाैमा बसाेबास गरर म काठमाणडाैमा पढदैछु बेचुलर रनिङमा छु ।
मेराे पढाइकाे विषय मेनेजमन्ट विषायमा पढछु त्यसकारणा जापनजानकाे लागी मैले लगभग सम्पुर्ण तयारी गरी सके त्यस कारण मैले याे साेचेकी म त पढन जाने हाे ।
मेराे लगभग उमेर पनि पुगी सकेकाे छ । साथमा मैले विवाह गरेर एउटा इमान्दार केटालाई लान सके भने उसले नि पैसा कमाउन सक्छ । अनि मलाई पनि साहारा हुनछ ।भन्ने मेराे मनमा एउटा विचार अायाे ।
उत विचार मैले मेराे घरमा बा अामालाइ पनि भने, र बा अामाबाट पनि त्याे कुरा लाई स्विकार गर्नुभयाे । मैले लगभग २, ३ महिना सम्म इमानदार मेहेनति सहनसिल भएकाे २२ बर्ष नाघेकाे केटा पनि खाेजे तर भने जस्ताे पाउन सकिन र म पूर्व घरबाट फर्केर अाए ।
भन्ने विश्वासलागेकाे छ । यदि तपाइमा मैले भने जस्ताे गुणाहरू छ भने मात्र मलाइ मेजेस गर्नुहाेला नत्र पिलिज तपाइहरूले दुख नगरीदुनु हुन अनुराेध सबैमा गर्दछु ।
मैले अाज सम्म अाइपुग्दा धेरै दुखहरू भाेगेकाे हुदा खेरी उत दुखलाइ बुझनेखालकाे केटा चाहिएकाे हाे । मेराे हरेक पाइा पाइलामा साथ दिने म संगे सधे वस्ने, म संगै रमाउने मेहेनति लपनझपन नभएकाे हुनु पर्नेछ ।
यसकारणा पनि मैले त्यस्सताे खालकाे केटा खाेजेकाे हाे/ कृपयाआफ्नो नम्बर वा इमेल आइडि तल कमेन्ट गर्नुहोला।
५/६ दिनसम्म यस्ता खाना हरुको कन्ट्रोल गरेमा लिवरलाई सफा गर्ने घरेलु औषधीले पूर्ण रुपमा काम गर्छ। यो प्रक्रियाको बीचमा १/२ दिन फलफुल मात्र सेवन गर्नु पर्छ।यसो गर्नले लिवरले आराम पाउनुका साथै यसको थकान र कमजोरी कम हुँदै जान्छ।
फलफुलमा स्याउ, मेवा, खर्बुजा, तर्बुजा, भुँईकटर, चुकंदर र सुन्तला लगायत सेवन गर्दा एकदम फाइदाजनक हुन्छ।
लिभरको सफा गर्नको लागि ५/६ दिनसम्म यसरी एकदम हलुका र सादा खाना सेवन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
५/६ दिन पछी आफ्नो नियमित खाना खान सक्नुहुनेछ।अब यो प्रक्रिया ५/६ दिन पुरा गरेपछि लिवरको फोहोर, खराबी वा बिमारीलाई पूर्ण रुपमा हटाउनको लागि अपनाउनु पर्ने घरेलु उपचार विधि: १. यसको लागि चाहिने सामग्रीहरु: लौका, बेसार, कागती, धनियाँ, कालो नुन, गुर्जोको रस।
गुर्जोको रस अर्थात् गिलोयको रस जुनसुकै आयुर्वेदिक सप वा सुपरस्टोरमा किन्न सकिन्छ।बनाउने विधि: लौकालाई सानो सानो टुक्रामा काटेर थोरै धनियाँ पातको साथ ब्लेंन्डरमा राखेर जुस बनाउने ।
लगभग एक गिलास जुस बनाउने। अब यो जुसमा एक चम्चा बेसार, एक चम्चा कालो नुन, एक चम्चा कागतीको रस र करिब ३० एमएल गुर्जो अर्थात् गिलोयको जुस मिलाएर मिसाउने।
यो ड्रिंकलाई हरेक बिहान खाली पेटमा सेवन गर्ने। यस ड्रिंकलाई लगातार ६/७ दिन सेवन गर्नले लिवरमा हुने सम्पूर्ण खराबी वा फोहोर बाहिर निस्केर जान्छ।२. मुलाको पात: मुलाको पातमा भिटामिन A, B र C पाइन्छ।
यसमा अधिक मात्रामा फाइबर हुने भएकोले यसले हाम्रो पाचनलाई राम्रो बनाउँछ र लिवरको कार्य क्षमतालाई पनि बढाउँछ।
यसको लागि मुलाको पातलाई राम्ररी पखालेर जुस बनाउने। यो जुसलाई हरेक दिन खाना खाए पछी पिउने। यो जुस लगातार ६/७ दिन सम्म पिउनले लिवरसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरुलाई हटाउँछ
।३. किसमिसको पानी: करिब ५०० एम एल पानीमा एक कचौरा किसमिस रातभरी भिजाएर राख्ने। बिहान पानीलाई छान्ने र यस पानीलाई बिहान खाली पेटमा थोरै पिउने । साथै पुरै दिन एक एक घण्टाको अन्तरालमा यस किसमिसको पानी थोरै थोरै गर्दै पिउने।
त्यस्तै भिजेको किसमिस लाई बिहान खाजाको साथ वा बेलुका सेवन गर्न सकिन्छ। लगातार ३ दिन सम्म किसमिसको पानी खानाले लिवर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या बिस्तारै हट्छ र लिवर स्वस्थ हुन्छ।४. गहुँको जुस: गहुँमा क्लोरोफिलको मात्रा अधिक हुन्छ।
साथै यो एक शक्तिवर्द्वक एन्टीअक्सिडेन्ट हो। गहुँको जुसको सेवनले लिवर सम्बन्धी सम्पूर्ण बिमारीलाई दुर गराउँछ। गहुँको जुस जुनसुकै आयुर्वेदिक पसलहरुमा किन्न पाइन्छ।
यी साधारण घरेलु चीज वा उपचार विधिले लिवर सम्बन्धी सम्पूर्ण खराबी वा बिमारीलाई संधैको लागि हटाई लिवरलाई स्वास्थ्य र स्वच्छ बनाउँछ। एजेन्सीगर्भ रहे नरहेको थाहा पाउने पाँचओटा लक्षणहुनत आजभोलि गर्भवती भए नभएको कुरा पत्ता लगाउने अनेक उपाय छन् ।
प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट प्रयोग गरेर गर्भ यकिन गर्न सकिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा यस्ता परीक्षण गर्ने विधीहरु सर्वसुलभ हुँदैनन् । यस्तो बेला कसरी थाहा पाउने आफू गर्भवती भएको कुरा ? आउनुस् जानौं पाच ओटा तरिका ।१. तपाईं अन्तिम पटक महिनावारी भएको कुरा याद गर्नुहोस् ।
यदि नियमित महिनावारी हुने गर्नु भएको छ भने तपाईंको महीनावारी हुने दिन नाघिसक्दा पनि महिनावारी हुनु भएन भने तपाईं गर्भवती हुनु भएको छ । २. स्तनको आकारमा परिवर्तन देखिन सक्छ । तपाई)लाई लाग्नसक्छ कि तपाईंको स्तनको मुन्टो केही रसिलो भएको हुनसक्छ ।
र, स्तनको आकारमा पनि वृद्धि भएको हुनसक्छ । यस्तो भयो भने तपार्इं गर्भवती हुनुभएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।३. केही नखाँदा पनि गनाएको जस्तो हुने, हरेक कुरामा गनाएको आभास हुने, वाकवाकी तथा वान्ता नै आयो भने पनि तपाईं गर्भवती हुनुभएको थाहा पाउन सकिन्छ ।
४. दिक्क लाग्ने, दिशापिसाव लागेजस्तो हुने तर नलाग्ने, मुड परिवर्तन भइरहने अर्थात घरी रिस उठ्ने घरी शान्त रहन मन लाग्छ ।५. घरी घरी पिसाव लागिरहने भयो भनेपनि तपाईं गर्भवती हुनुभएको हुनसक्छ । यस्ता लक्षणहरु देखिनासाथ गर्भको परीक्षण गराइहाल्नु पर्छ ।
श्रीमानले गरे ६ वटी श्रीमतीसँग एकैपटक यौन सम्पर्क, त्यसपछि घट्यो यस्तो डरलाग्दो घटना !कुश्मा – पर्वतको सदरमुकाम कुश्मा बजारमा नेपालकै अग्लो शिव–पार्वतीको मूर्ति बनाउन रकम सङ्कलन शुरु भएको छ ।
गुप्तेश्वर गुफालाई केन्द्रमा राखेर कुश्मामा ऐतिहासिक धार्मिक विराट गुप्तेश्वर मेला एवं कोटी होमको आयोजना गरी शिव पार्वतीको मूर्ति निर्माण गरिने भएको हो । सो मूर्ति न्यूनतम् ५१ फिट अग्लो बनाइने प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ ।
थप अध्ययन गरेर एशियाकै लामो हुने गरी मूर्ति बनाइने मेला आयोजक समितिले जनाएको छ ।मूल समिति निर्माणसँगै हालसम्म रु २८ लाख जुटिसकेको छ । मूर्ति निर्माणका लागि १५१ जनालाई संस्थापक बनाइने आयोजकले जनाएको छ ।
मुख्य प्रवचक पं. ईश्वरकृष्ण महाराजजीले भन्नुभयो,“पार्वतीजको जन्मभूमिको रुपमा परिचित कुश्मा र भगवान् शिव गुप्त हुनुभएको भनी विश्वास गरिएको गुप्तेश्वर क्षेत्रमा विश्वकै अग्लो शिवपार्वतीको मूर्ति बनाइन हामी लागेका छौँ ।”मूर्ति निर्माणका हालसम्म नै २८ जना स्थानीयवासीले रु एक–एक लाख दान बोलिसक्नुभएको भेला आयोजक समितिका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो ।अन्य गुल्मीमा बैकुण्ठ चतुदर्शीका अवसरमा लाग्ने मालिका मेला तथा मालिकादेवीको दर्शनका लागि बाग्लुङ्ग तथा अर्घाखाँची लगायतका जिल्लाका भक्तजनहरु मालिका मन्दिरमा शुक्रबार विहानैदेखि दर्शन तथा पुजाआरधा गर्न हजारौ दर्शनार्थीहरुको घुइचो लागेको छ ।साथै चिच्याएर बर माग्ने परम्परा तोड्दै अहिले मनमनै माग्न थालिएको छ ।
छात्रामाथि शोषण गरेको आरोपमा मन्त्री पक्राउ
कानून कलेजकी छात्रामाथि यौन शोषणको आरोपमा भारतका पूर्व केन्द्रिय मन्त्री पक्राउ परेका